Mamakivaky Ny Tantaran’i India Indray Amin’ny Alalan’ny Sarim-pianakaviana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jolay 2013 18:29 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Dansk, polski, Italiano, Ελληνικά, English
Ny habaky ny Tetikasam-Pahatsiarovana an'i India no mamaritra azy ho “tantara hita maso sy am-bava ao amin'ny zana-kaontinanta indiana amin'ny alalan'ny tahirin-tsarim-pianakaviana”. Natombok'ilay mpakasary sy mpanao sariitatra Anusha Yadav, tamin'ny taona 2010 ny tetikasa fanangonana andian-tsary nofantenana amin'ny aterineto izay andraisan'ny daholobe anjara. Mitantara izay ambaran'ireo sary ihany koa ny mpandray anjara.
Niresaka tamin'i Anusha Yadav mikasika ny antony nahatonga azy nanangana ny habaka sy ny fomba fiasan'izany ny Global Voices.
Global Voices (GV): inona no nanosika anao namorona ny Tetikasam-Pahatsiarovana an'i India?
Anusha Yadav (AY): Anisan'ny nahasarika ahy hatrany ny fakàna sary eny amin'ny mozea, amin'ny boky na any an-tranon'olona. Tany Jaipur, renivohitry Rajasthan no nahalehibe ahy, ary nandritra ny fahazazako, niaina ny zavatra fahagola sy ny lapa voakolokolo sy voatahiry tsara aho. Ahitana mozea misy sary sy fitaovana manokan'ny mpanjakavavy ny fianarako Maharani Gayatri Devi School. Rehefa mankany amin'ny namako aho, mandinika ela ireo sary mandravaka ny fanaka sy ny rindrina, sarin'ireo sangan'olona ao amin'ny fanjakam-panjaka na sarim-pianakaviana tsotra.
Ao an-tranoko, ny fandinihana matetika ireo sary nalain'ny raiko efa maty no nandanianay ny vakansy , sarinay tamin'ny nonina tany Londra (Angletera) sy tany Portland (Etazonia). Tiako iainana indray izay fahatsiarovana hitako fa tsara indrindra, ary tsy nanaiky mihitsy aho raha tsy notantarain-dreniko tamiko ireo zava-niainanay rehetra tamin'ireo toerana ireo. Tsy dia nahasarika ahy firy toy ny sary ny hosodoko. Eritreritra ny hosodoko, na koa noforonina, fa ny sary tena izy no manintona ahy kokoa satria manakaiky ny marina. Nitondra ahy nitsangatsangana ireo sary nahasarika ahy, mampanontany ahy momba ireo olona, ny fiainany sy ny zava-niainany.
Sary nomena ny Tetikasam-Pahatsiarovana an'i India avy amin'i Laxmi Murthy, Bangalore: “Ny ray aman-drenibeko (ankavanana) miaraka amin'ny fianakaviana Chennagiri, ao Tumkur, Fanjakan'i Mysore( Karnataka ankehitriny), tamin'ny taona 1901.” Afaka ampiasaina ny sary.
Tamin'ny 1992 hatramin'ny 2006, nianatra tao amin'ny Ivon-toerana Nasionaly momba ny haikanto an-tsary ao Ahmedabad aho, niasa taminà orinasa maro momba ny haikanto an-tsary sy dokambarotra aho, nivezivezy sy niaina taminà faritra maro manerantany sy tao India aho. Nanjary zava-dehibe tamiko ny fakàna sary sy ny sary. Toa mahatsiaro mahafantatra tsara izao tontolo izao aho noho ireo sary.
Tamin'ny taona 2006, nandranto fianarana tao amin'ny oniversite Brighton aho mba hahazo mari-pahaizana “master” amin'ny taranja haisary, saingy noho ny tsy fananako vola, voatery niala aho afaka enim-bolana ary nody tany India. Tamin'ny 2007, nanohy niasa toy ny mpakasary sy mpanao sary printy aho ary nanomboka nanolo-kevitra momba ireo bokin-tsary lehibe ho an'ireo mpanonta printy. Avy amin'ny fandinihana nataoko nandritra ny taona maro no nitsirihan'ny hevitra tato anatiko fa manana sary iray manokana farafahakeliny ny olona tsirairay avy. Ao India, ny sary mariazy no sarim-pianakaviana tena mahazatra, fotoana iray hakana sary matetika. Raha tsy afaka manao izany (maka sary) ny olona, matetika alaina sary ireo mpivadivao aorian'ny mariaziny. Porofon'ny mariazy ireo karazana sary roa ireo. Mba hamantarana sy hitahirizana ireo kolontsaina isan-karazany sy ny mampiavaka an'i India amin'ny alalan'ireo sary miavaka amin'ny fanambadiana, fitafy, fombafomba, sy lanonana adino vetivety, hitako fa hevitra tsara ny bokin-tsary.
Mahagaga, vao avy namoaka sehatra vaovao fizarana sary ny Facebook, manamarika ny fanombohan'ny sary sy tantara ifandrimbonana (crowdsourcing) izany. Nanangana vondrona fanangonan-tsary avy amin'ireo fianakaviana, namako sy ny daholobe aho, ary mangataka azy ireo mba hanazava momba ny sary. Nihoatra lavitra tsy araka izay noheveriko ny zava-nitranga satria tsy ny tantara an-tsary mariazy ihany no nalefan'ireo mpandray anjara fa tantara an-tsary maro hafa. Nitantara zava-nitranga maro izy ireo izay tonga tato an-tsaiko ny hametrahana izany isan-tsokajy: tahaka ny fivakisan'i India, Pakistan sy Bangladesh, ny Fanjakana britanika, ny fifindram-ponenana, ny fitiavana, ny fanambadiana sy ireo namana, ireo gidragidra sy ireo ady lehibe, ny asa sy ny fandraharana, ny fiainam-pianakaviana mahazatra sy ny tsy mahazatra. Arahina tantara mahavariana sy mahafinaritra momba ny fiainana, fianakaviana, ny hasosorana sy ny zava-bita ireo sary tsirairay avy, avy amin'ny tantara iombonan'ny firenena sy zana-kaontinanta izany. Nipetraka soa aman-tsara ny hevitra momba ny Tetikasa Fahatsiarovana an'i India.
Sary nomena ny Tetikasa Fahatsiarovana an'i India, avy amin'i Sawant Singh, Mumbai: “Ny renibeko Kanwarani Danesh Kumari, Patiala, Punjab, vers 1933.” Misokatra ho an'ny rehetra ny sary.
GV: Misy fetrany ve ny fitaovana ekenao ampiasaina?
AY: Tokony talohan'ny taona 1991 avokoa ny sary sy ny tantara rehetra. Satria nanomboka teo – noho ny halakin'ny famoahana ny sary vita adiny iray, ary lasa nomerika ankehitriny – no tsy manam-panahy loatra intsony ny sary. Tsy midika akory izany fa tsy azo raketina ireo sary amin'ny taonjato XXI, saingy manana taonjato roa tsara fantarina alohan'izany isika. Tiako kokoa ireo sary nalaina efa nomanina tsara mialoha, izay mifanaraka tsara amin'ny tantara.
GV: Manaiky ny fandraisana anjara ivelan'i India ve ianao?
AY: Eny, mandray aho. Hatreto, sary sy tantara eo amin'ny 20 eo avy amin'ireo olona any ivelany no efa voaraiko, tahaka an'i Afrika Atsimo, Aostralia, Angletera, Pakistan, Bangladesh ary Etazonia. Mandray izay sary sy tantara rehetra ny tetikasa rehefa ahitana toetra Indiana izany.
Sary nomena ny Tetikasam-Pahatsiarovana an'i India, avy amin'i Nate Rabe, Melbourne, Aostralie: “Ireo namako, Jeff Rumph, Martyn Nicholls, ary izaho (eo afovoany), lehilahy tsy fantatra sy ny raiko, Rudolph Rabe (ankavanana), tany Dehradun, Uttar Pradesh ( Uttaranchal ankehitriny), Jiona 1975.” Misokatra ho an'ny rehetra ny sary.
GV: Inona avy ireo sary sy tantara ankafizinao indrindra ao amin'ny habaka ?
AY: Matetika ireo sary sy tantara nalefa farany no tena tiako alohan'ny hahatongavan'ny sary sy tantara manaraka indray! Tsara avokoa ny sary sy tantara rehetra satria singa vaovao manoritra ny tantaran'i India.
Zava-dehibe amiko ihany koa ny mahita ireo olona afaka mitantara tsara ny fiainam-pianakavian'izy ireo sy ireo tantara tsy mba fantatra na voafafa. Mampiseho ny fivoaran'ny fiarahamonintsika ny fahavononan'ny olona mitantara ny tontolony.
Manazava ny Tetikasa Fahatsiarovana an'i India ity lahatsary ity: